नेपाली भाषाको नाम खसजुम्ली राख्नुपर्ने तिगेलाको जिकिर – Dhankuta News : Daily Online News From Nepal
२०७७, १३ जेष्ठ मंगलवार २१:३७
धनकुटा । नेपाली साहित्यको परिभाषा र भाषाको नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ । अब नेपाली भाषालाई खसजुम्ली राख्नुपर्छ । सो कुरा गत २३ मे २०२० का दिन नेपाली साहित्यका अध्येयता विश्वास दीप तिगेलाले एक कार्यक्रममा बताएका हुन् ।
ग्लोबल नेटवर्कको भर्चुवल नियमित ५ औं श्रृंखला कन्फिरेन्समा साहित्यकार तिगेलाले प्रिजेन्टेशन गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन । तिगेलाले भाषाको नाम नेपाली राखिनुले नेपालका अन्य भाषीहरुको मनोविज्ञानमा असर भएको र नेपाली पहिचान भएका भारत, भुटान र वर्माका नागरिकहरुमा भाषिक हिंसा भएको कुरा तथ्य सहित प्रस्तुत गर्दै समाधानको लागि भाषाको नाम नेपालीको सट्टा खसजुम्ली भन्नु उपयुक्त हुने आधार प्रस्तुत गरेका थिए । उनले नेपाल भित्र बोलिने सबै मातृभाषाहरुको साहित्य संमग्रमा नेपाली साहित्य भनि परिभाषा गर्नुपर्ने पनि जिकिर गरे । त्यस्तैगरी विकल्पको रुपमा नेपाल भित्रका सबै भाषाहरुको साहित्य भनी जनाउन नेपालीय साहित्य भन्न सकिने पनि तर्क प्रस्तुत गरे ।
तिगेलाको प्रस्तुती पछि भाषाविद् अमृत योन्जनले यो बेग्लै पाटोको विषय बहसमा आउनु नयाँ र महत्वपूर्ण भएको बताए । यस्तै प्राध्यापक बालकृष्ण माबोहाँङले अघोषित भाषिक समस्याको उठान हुनु आवश्यक रहेको बताए । तिगेलाको प्रस्तुती माथि खुसी लिम्बु, प्रमोद श्रेष्ठ (युएई), अमित थेवे (युके), साङसेन पन्धाक, मुनाराज शेर्मा, मनोज घर्तिमगर, टेक बहादुर थापा, लिलासेलिङ माबो, डा. निमेश लम्साल, धनराज लिम्बु (साउदी), पदम चेन्जी लगायत डेड दर्जनले जिज्ञासा सहित प्रश्न र सुझाव दिएका थिए । कन्फरेन्समा विभिन्न मुलुकबाट चार दर्जन साहित्यकारहरु सहभागी भएका थिए ।
सो कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको उत्तर दिदै आफ्नो दुई कार्यपत्रको सांराश प्रस्तुत गरेको र आफ्नो प्रकाशोन्मुख पुस्तकमा समेटिने तिगेलाले बताए । अमेरिकाको म्यासेच्युट युनिभर्सिटी मातहत डा. मारुहाँङ लिम्बुको संयोजनमा आयोजित कन्फिरेन्स करिब दुई घण्टा चलेको थियो ।
टायम कार्डको पालना गर्न बाणिज्य संघको आव्हान